Tetikasa Avotse: vita ny EPP ao Behodatse sy Ankazombalala (Tsihombe) | NewsMada
Tetikasa Avotse: vita ny EPP ao Behodatse sy Ankazombalala (Tsihombe)
« Efa volana maro no nitsidihako ny faritra Atsimo nitady vahaolana mahomby sy maharitra entina hamongorana ny tsy fanjarian-tsakafo. Izay no namolavolana ny tetikasa Avotse », hoy ny vadin’ny filoha.
Efa-bolana taorian’ny fanaovan-tsonia tamin’ny mpiara-miombon’antoka maro, notokanana ny EPP tao Behodatse sy Ankazombalala, distrikan’i Tsihombe, faritra Androy, ny talata lasa teo natrehin’ny vadin’ny filoha sady filohan’ny Fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy. Tafiditra anatin’ny tetikasa Avotse ho fanampiana ny mponina ianjadian’ny kere sy tsy fanjarian-tsakafo izany, araka ny fanazavana. Fokontany roa voasakajy ho isan’ny mizaka mafy ny vokatry ny mosary ato anatin’ny faritra Androy i Behodatse sy Ankazombalala. Fokontany roa ato anatin’ny kaominina Anjampaly, distrikan’i Tsihombe ireo.
Olana hafa sedrain’ny mponina koa ny faharatsian’ny fotodrafitrasam-pampianarana. Tafo bozaka no nisy teo aloha ho an’ny EPP Behodatsy ka voatery mitsahatra roa na telo volana ny fampianarana rehefa fotoam-pahavaratra. Manampy trotraka ny hanoanana ka mampihena ny tahan’ny fandehanana an-tsekoly. Hita taratra tamin’ny voka-panadinana farany teo izany toe-javatra izany. 63,63 % ny taham-pahafahana CEPE 202, hoy ny talen’ny EPP Behodatse, Ananjato Jerome Emilien. Vahaolana nentin’ny OIT sy ny fikambanana Fitia ary ny Fondation Viseo ny fanamboarana sekoly EPP vaovao ary nanome asa ho an’ny zanaky ny distrikan’i Tsihombe ny fanorenana.
« Tanàna 20 no hisitraka ny tetikasa Avotse ka ny fito ao anatin’ny faritra Anosy ary 13 any Androy iarahana amin’ny mpiara-miombon’antoka sy mpandraharaha. Tadifiditra ao ny fananganana sekoly manara-penitra sy ny « cantines scolaires » maimaim-poana, izay mamatsy koba aina ny maraina ary vary sy laoka ny antoandro”, hoy ny filohan’ny fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy.